Babies mittens & iibhutsi abaxhasi kunye factory - China Babies mittens & iibhutsi abavelisi
Yenziwe ngofele lwegusha lwase-Australia kuphela, luyathandeka, lutyebile kwaye luqinile.Lulungele ukugcina iinyawo ezincinci zifudumele kwaye zikhululekile, ziyilelwe ngekhafu enithiweyo ukuze zibambe izihlangu ngokufanelekileyo endaweni yezo zinyawo zincinci zincinci..Phelele ukufudumeza nokondla iinyawo ezincinci. ● Inqaku lenqaku: BS-003 ● Ivula ngekhafu enithiweyo ● I-outsole yerabha ehlala ihleli ● Umbala: bomvu, beige, pinki, bhlowu kunye neminye imibala. ● Ubungakanani: itshathi yesayizi
Abantwana / Abantwana abasakhasayo ufele lwegusha / imvana yeebhokhwe / iibhutsi
Yenziwe ngofele lweegusha lwase-Australia kuphela, oluyathuthuzelayo, lokondla kunye nolufudumeleyo Ukuqiniswa kwethebhu yokukhawulezisa kulula ukuyilungisa ngeminwe encinci. Ukuphela kwe-EVA ekhanyayo ilula kwaye iyaguquguquka. Kukugqibelele ukukhaba malunga nepaki, ukunyuka amatye elunxwemeni okanye ukujinga nje edolophini ● Inombolo yomgaqo: BS-002 ● Ivula ivuleke kwaye ibambe velcro ● I-outsole yerabha ehlala ihleli ● I-EVA yodwa ● Umbala: mnyama, mdaka, inkamela, pinki , ngwevu neminye imibala. ● Ubungakanani: itshathi yesayizi
Yenziwe ngofele lweegusha lwase-Australia kuphela, luyathandeka, lutyebile kwaye luhlala ixesha elide.Lulungele ukugcina iinyawo ezincinci zifudumele kwaye zintofontofo, ziyilelwe nge-velcro ezenza kube lula ukunxiba kunye nokugcina iinyawo ezirhabaxa.Uphelele ukufudumeza nokondla iinyawo ezixabisekileyo. -001 • Ivula ivule nge-velcro • I-outsole yerabha ehlala ihleli • Umbala: omnyama, omdaka, inkamela, pinki, ngwevu neminye imibala. • Ubungakanani: itshathi yobukhulu
Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobuqhetseba, Yenziwe ngesikhumba semvana esithambileyo, esinoboya obutofotofo nobutofotofo, Yindalo ye-thermostatic ukuze ezi mittens zifezekise unyaka wonke. ilungele ukusetyenziswa kwemozulu yemihla ngemihla kunye nokubanda. ● Inqaku akukho: KM-002 ● I-100% yokwenene yokucheba ● Ukuthungwa kwesandla esiphambeneyo ● Umbala: imibala edibeneyo ● Sula ucocekile ● itshathi yobukhulu
Yenziwe ngobunono kwaye yenziwa ngobuqhetseba, Yenziwe ngesikhumba semvana esithambileyo, esinoboya obutofotofo nobutofotofo, Yindalo ye-thermostatic ukuze ezi mittens zifezekise unyaka wonke. ilungele ukusetyenziswa kwemozulu yemihla ngemihla kunye nokubanda. • Inqaku akukho: KM-001 • 100% itakane lokwenyani eliyinyani. • Faka ibhanti elide ukudibanisa izinto ezimbini ezinemibala • Umbala: imibala edibeneyo • Sula ucocekile